Gini mere ahia ahia na ire ahia ji ele anya karie omenala CRM | Martech Zone
Gini mere ahia ahia na ire ahia ji ele anya karie omenala CRM
Tọzdee, Disemba 10, 2019 Tọzdee, Disemba 10, 2019 Austin Rolling
Dị ka ụwa na-esiwanye impersonal na immergence nke teknụzụ - na-elekọta mmadụ media, video akparị ụka, wdg Ohere ka onwe ya nnọọ ezigbo ụzọ. Echiche nke mere mgbe ọ bụla sitere n'okike, nke kensinammuo ma dịrị nke ọma dịka a na-echezi echiche emeela ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma, na-eri oge dị oke ọnụ karị. Ihu n’iru ndị ị chọrọ iwulite mmekọrịta. Ọ dị ka echiche doro anya nke ọma, mana nke bụ eziokwu bụ na ọha mmadụ anyị agaalala n'ụdị nkwukọrịta nke onwe anyị n'aha nkasi obi.
Echiche anyị banyere mgbanwe mgbanwe a abụghị isi. Ebumnuche m na mpempe akwụkwọ a bụ imetụ aka na etu eziokwu ọhụrụ a siri nwee mmetụta ire na ire ere ngwaọrụ. Itinye o doro anya na ahịa ọkachamara nwere ike n'ezie na-uru nke ohere na meghere dị ka a n'ihi nke ụba inundation si dijitalụ ahịa na ahịa si eme yana ulo oru 'ụba ịdabere na n'ime ahịa eme.
Inweta n'azụ tebụl na ịme kọntaktị na atụmanya bụ ụzọ dị mfe iji weeiche ọdịiche ahịa ahịa na mkpọ. Ọ na-enyekwa ha ohere nke ijikọ ma na-eme mmekọrịta n'etiti ndị nwere ike ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha na-enye. Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, yabụ na ọ bụkwa eziokwu bụ echiche bụ na ha chọrọ nkwado na ozi kwesịrị ekwesị iji mezuo nke ọma mgbe ha nọ n'ọhịa. Ngwado oru ahia na teknụzụ bụ ezigbo ihe atụ bụ ụzọ iji nwekwuo nkwado.
Arụrụ m ọrụ ọtụtụ n'ime ọrụ ahịa n'ime na n'èzí. Usoro ọrụ nke ọrụ ọ bụla dị iche na mgbanwe dị iche iche na-emetụta arụmọrụ arụmọrụ. Dị ka onye na-ere ahịa n'ime ụlọ, m nọdụrụ na cubicle, ma ọ bụ ọfịs m, ma kpọọ ekwentị ụbọchị niile n'etiti izipu na ịzaghachi ozi ịntanetị. Nkwado azụmahịa, dejupụta akụkọ na idekọ akara aka ndị ahịa m na ụlọ ọrụ CRM bụkwa akụkụ nke ụbọchị kwa ụbọchị. Dị ka onye na-anọchite anya n'èzí, m ga-eme ihe ndị a tupu na mgbe mmadụ na-eleta gị oge ụfọdụ mgbe m nọ n'ụgbọala m. M dị nnọọ mma ma ọ bụrụ na m mere ya site na okporo ụzọ swiftly (nke anaghị eme mgbe mgbe na Houston). Ihe ndị dị ka oge nke ụbọchị yana ọnọdụ ihu igwe na-ekpebisi ike ma ọ bụrụ na njem ga-agwụ ike ma ọ bụ na ọ gaghị. Ọ bụrụ na m na-etinye ihe omume n'otu n'ime akaụntụ ndị ahịa m, enwere m ike ijide nsonaazụ (ọnụ ọgụgụ na qualitatively) ebe m nọ. Ogologo akụkọ dị mkpirikpi - enwere ọtụtụ ihe na-emetụta ọrụ m kwa ụbọchị dị ka onye na-ere ahịa n'èzí, yabụ ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe na-emetụta ohere nke ịga nke ọma.
Site na njikwa, ejiriwo m ihe karịrị 80 reps sales n'otu oge ndị na-arụsi ọrụ ike na-arụ ọrụ ahịa na ahịa ha niile dị iche iche n'oge oge ọ bụla. Site na ndị ọrụ a na-arụ ọrụ dị iche iche n'akụkụ dị iche iche nke mba ahụ, enwere mgbagwoju anya gbasara inweta, nghọta, na iji ihe ọmụma bara uru banyere ụdị ndị ahịa anyị na-achọ ịsọ mpi n'ime. Na-enweghị ozi a, ọ bụ ọtụtụ ihe siri ike ịkpụzi ahaziri usoro atụmatụ ubi.
Nsogbu na Omenala CRM
Ngwa ahia ndị a na-enweta bụ nke ewuru maka ọrụ dị n'ime ahịa. Omenala CRM nwere interface nke na-ekwekọ n ’ọnọdụ nke ịkpọ oku ekwentị na izipu ozi ịntanetị. Ha abaghị uru maka onye na-ere ahịa n'èzí na-agagharị ma ọ naghị enwe ohere ịnweta desktọọpụ ma ọ bụ WiFi mgbe niile.
N'èzí ire na otu ndị na-ere ahịa n'ọhịa chọrọ ngwaọrụ ndị ewuru iji kwado ọrụ ọrụ ha pụrụ iche kwa ụbọchị. Ngwa ahịa ahịa mkpanaka raara nye ọrụ ire ahịa nwere ike inyere ndị azụmaahịa aka inweta ma chịkwaa data, dozie arụmọrụ ubi, gbaa ume mmekorita, jigide nzaghachi na ịbawanye arụpụta.
Etu esi apụ na mpụga nwere ike ịgbazinye teknụzụ
Dịka e kwuru, onye na-anọchite anya ya na-agakarị njem, na-enwe nzukọ ihu na ihu ma na-eche ihe ndị a na-eme na ụbọchị ha nkịtị. Dịka ọmụmaatụ, ọnọdụ ihu igwe na-adịghị mma, mkpọchi okporo ụzọ, na usoro iheomume nwere ike imetụta ụbọchị maka nzaghachi ubi, yana ịgbatị arụmọrụ ya. Nke a bụ ihe kpatara CRM ọdịnala agaghị edozi mkpa nke ụlọ ọrụ ndị na-asọmpi site na mmemme ndị ọzọ. Reps chọrọ ihe ngwọta ọgbara ọhụrụ nke ewuru iji lebara nuances anya nke na-eme ka arụmọrụ ha dị iche.
E nwere ọtụtụ ụzọ ubi ndị na-emegharị ihe nwere ike ile anya iji melite arụmọrụ site na itinye teknụzụ, lee ihe atụ anọ.
Hazi ụbọchị bụ ihe dị mkpa maka ịga nke ọma n'ọhịa. N’oge gara aga, ọtụtụ na-amali elu n’elu akwa n’ụtụtụ ma jiri anya na-ekpebi ebe ha ga-aga rue ụbọchị ahụ. N’ụzọ doro anya, ọ ka mma itinyekwu echiche banyere ya ma a bịa na ileta akụkọ ndị na-atụ anya ma ọ bụ nke ugbu a. Agbanyeghị, ọ bụghị mgbe niile enwere ike ịdabere na ngwaọrụ ndị enyere maka ndị na - emegharị ahụ - ntanetị dị mfe, nke na-enweghị nghọta dị mkpa ebe a. Ha ga-ekwe ka ndị nwe ike wepụta oge iji hazie kalenda ha maka izu ole na ole ruo otu ọnwa tupu ha achọ.
Nke a na - enyere ha aka ịkwụsị ma chee maka ndị ahịa ọ bụla nọ n’ókèala ha ma mee ka ha chee echiche nke ọma. Ọzọkwa, ịnwere ike ịlele ókèala gị na maapụ dị ndụ site na a ngwa ahịa ngwa ma belata oge ikuku na oge njem. Obere oge ha na-eme njem, oge na-egbu oge nwere ike imechi azụmahịa na ilekọta ndị ahịa.
2. Akaụntụ Akaụntụ
Reps nwere plethora nke data ha chọrọ iji nweta ma hazie. Mgbe ị na-arụ ọrụ n'ime ahịa, ị nwere okomoko nke na-adọta dashboard CRM n'oge oku na-eleghachi anya na ndetu. Onye nzaghachi ubi enweghị uru ahụ oge niile. Ha kwesịrị inwe ike ịnweta isi ozi banyere akụkọ ihe mere eme na ọpụpụ. Ọ dịkwa ha mkpa inwe ike imelite ozi akaụntụ na-eso nkwụsị n'ụzọ dị irè. Inye ohere mkpanaka na data akaụntụ ga - enyere aka nke ukwuu.
3. Nyochaa data
Ugbu a ị nwere data ahụ, ịkwesịrị iji ya mee ihe. Ga-ada n'azụ asọmpi ma ọ bụrụ na ịnweghị nyochaa data gburugburu arụmọrụ, ahịa ndị ahịa, na ndị ahịa. Nke a karịrị ịchọ nọmba ahịa. Ọ pụtara inyocha ma ihe ị na-arụ ọ na-arụ ọrụ ka ọ bụ na ọ naghị arụ ọrụ. Site na teknụzụ nke oge a, onye na-anọchite anya ya ekwesịghị ịdabere na onye ọzọ n'ime ụlọ ọrụ ahụ iji lelee data ha ma kpọghachite ya. Site na teknụzụ dị taa, ọtụtụ usoro nyocha ugbu a na-akpaghị aka, na-enye ndị ọrụ ahịa ohere itinye ego na nyocha data n'onwe ha.
4. Nkwurịta okwu
Otu nnukwu ihe ịma aka maka ndị na-ere ahịa n’èzí bụ na ha na-arụ ọrụ iche na ibe ha. Nke a na - egbochi inyefe ihe ọmụma nwere ike ime site na ndị otu na - arụkọ ọrụ ọnụ. Na-enweghị ịnyefe ihe ọmụma ahụ, ọ ga-abụrịrị na ndị na-emegharị ihe ga-emeghachi mmejọ nke ndị ọrụ ibe ha. Enwere ọtụtụ uru ị na ndị gị na ha na-emekọ ihe mgbe niile dịka ịkekọrịta omume kachasị mma, ịmepe asọmpi na asọmpi enyi. Iji ngwa oru iji kwurita okwu na imekota ndi ozo bu uzo di nma iji bulie oru.
Etu esi ere ndi oru ahia
Ahịa ahịa dị elu dị elu abụghị naanị maka ndị na-emegharị ihe. Oge ụfọdụ, ọ nwere ike ịba uru karịa ndị njikwa ahịa. Dika nchoputa anyi si kwuo, ihe kacha elu 60% nke ndi oru ahia nwere ihe nchoputa banyere ihe ndi nzaghachi ha. Ha nwere ọrụ siri ike nke ịmara ihe onye ọ bụla na-eme na mpaghara ọ bụla, na-agbaso usoro ahịa dị iche iche na mgbanwe dị iche iche na-emetụta ụbọchị ọrụ ndị nnọchiteanya. Ha nwere ọtụtụ data ha kwesịrị ijide iji wepụta oge na akụrụngwa maka nnukwu ROI. Ndị a bụ ụzọ ole na ole isi njikwa ahịa nwere ike ịkwado teknụzụ.
Nọgide na-enwe data - Inwe ndekọ nke mmetụ akụkọ ihe mere eme nke ọ bụla na onye ahịa dị oke mkpa maka ụdị ahịa ọ bụla. Nke a nwere ike bụrụ ihe isi ike n'ahịa ahịa n'ihi na ọ na-eme ọfịs n'ọfịs na-enweghị usoro. Inwe ngwá ọrụ maka ndị na-edekọ ihe iji dekọọ oge ha nọ na nkwụsị na ihe a na-eme ebe ahụ na-enye ndị njikwa ohere ịghọta nke ọma ebe akaụntụ ọ bụla mara ọkwa.
Nlele Ogo - Ndị nlekọta na ndị na-anọchi anya na-achọ mgbe niile nkwekọrịta dị n’etiti nnwere onwe na ịza ajụjụ. N'ahịa ahịa, ndị njikwa nwere ike inwe nchegbu gbasara ọrụ a na-eme n'ihi na ha anaghị ahụ ha ka ha na-arụ ọrụ oge niile. Ngwa ahịa ahịa weebụ na ekwentị mkpanaaka nwere ike ịnye ụdị na akwụkwọ ajụjụ maka ndị mejupụtara iji mezue mgbe ha na-akwụsị iji soro ọrụ ha na-enyere aka belata nchegbu ndị njikwa nwere ike inwe.
Dezie Ọrụ - Onye na-ere ahịa ahịa na-abụkarị ihu ụlọ ọrụ. Wantchọrọ ijide n'aka na ha na-anọchite anya akara ahụ nke ọma. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-ahazi ma na-eso otu ìgwè dịpụrụ adịpụ, ịchọrọ ijide n'aka na ha niile na-agbaso otu usoro ahụ. Mpempe akwụkwọ na ajuju ajuju mejupụtara maka ịza ajụjụ na ịkọ akụkọ, na-enyekwa ndị njikwa ụzọ iji hazie arụmọrụ n'ofe otu ha.
Anya Pipeline - Onye njikwa chọrọ ịma ebe akaụntụ dị iche iche dị n'ime pipeline. Ha choro ikike ịhazi, dekọ ma nyochaa usoro dị iche iche nke ahịa ahịa. Iji ngwa ahịa ahịa dị elu, ndị na-emegharị ihe nwere ike ịdekọ mmelite na akaụntụ na ndị njikwa nwere ike ịhụ mmelite ndị ahụ ma hazie anya ebe ndị ahịa ga-anọ na paịpụ.
Mpaghara - Ngwá Ọrụ E Wuru Maka Ahịa Ahịa
Mpaghara bụ web na mobile dabere na CRM na ngwa ahịa ahịa na-enye ngwa maka iPhone, Android na web. Ikpo okwu a na - eje ozi n’èzí n’ahịa na ndi ahia n’ime mba 70. Ihe ndi ozo na enyere ndi oru ahia aka na ndi ozo. Maka ndị njikwa ubi, ọ na-enye ha ohere ịchọpụta nghọta banyere ahịa ha, soro ma nyochaa ọrụ otu, ma kwukọrịta okwu n'ofe ngwaọrụ. Ha na-enye ụlọ ọrụ na-akọ akụkọ na ụlọ ọrụ nyocha mkpa ka ha nwee ike ịga ahịa na ahịa mmemme ha. Maka ndị na-emegharị ihe ubi, Outfield na-enyere aka ịbawanye arụpụta ọrụ, ị nweta ego ma jikwaa ọrụ ha. Ngwa mkpanaka na-enye interface na-enweghị nghọta iji jikwaa ókèala ha na akụkọ mgbe ha na-aga. Onye nnọchianya nwere ike ịmepụta ọrụ nleta ngwa ngwa, nyefee ndetu, yana ịchekwa ma nweta ozi dị oke mkpa gbasara ndị na-azụ ahịa. Outfield na-enyeghachi ikike ịnọrọ na kọntaktị nke ndị ọrụ ubi, njikwa ma ọ bụ ndị ọrụ ndị ọzọ.
Ejiri ihe eji eme ihe ubi na ndi otu ahia. Ha na-enye azịza maka ịzụ ahịa n'ọhịa, njikwa mpaghara, atụmatụ ụzọ, azụmaahịa, ire ahịa na ịdebanye akaụntụ na ahịa ahịa.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ngwaọrụ Outfield na-enye iji nyere aka ịbawanye mmepụta site na reps.
Kalịnda Na-eme atụmatụ - Fieldlọ ọrụ dị na mbara igwe na-enye reps web yana kalenda ekwentị mkpanaaka iji nyere ha aka ịhazi nleta ha tupu oge eruo iji hazie ha. Ha nwere ike ịtọ ntọala ncheta na kalenda iji mee ihe dịka ịkwụsị ụfọdụ ndị ahịa. Ọ na-enyekwa ndị nlekọta ohere ịnọ na akaghị ihe ndị na-eme.
Route njikarịcha - Ebuli a njem bụ nnọọ uru. Onye obula ọ bụla maara na igbutu oge ikuku bụ ihe na-agbanwe egwuregwu. Fieldlọ ngosi ihe ngosi na-agagharị nleta gị ma nyere gị aka ịhazi usoro ụzọ ọtụtụ nkwụsị gị. Mpaghara nwere ike ịkọ ma bulie njem gị dabere na data akụkọ ihe mere eme na ezigbo oge.
Ọrụ Ndị Ọrụ - Site na Outfield, ị nwere ike ịdebe akara na oge, na-ekwurịta okwu na ibe gị na ndị njikwa nwere ike nchịkwa reps. Ngwa ahụ ga-ezite ọkwa iji hụ na ndị otu na-enweta ozi na oge.
Egwuregwu - ifyinggba chaa chaa na-ere ahịa bụ usoro eji eji ụkpụrụ na ahụmịhe gamified n'ime arụmọrụ ahịa gị iji nye gị agbamume ma mee ka asọmpi enyi na enyi. Ikpokoro nke Outfield na-enye ndị ọrụ ohere ịhazi arụmọrụ ahịa ha ma si otú ahụ mee ka ọrụ ndị ọrụ rụọ ọrụ.
Mpaghara na Omume
palladium, a Hospice na palliative na-eweta nlekọta, na-eji Outfield maka mpụga ahịa na ahịa ha. Ha na-ahụta ya dị ka ihe na-enye aka ma kwa ụbọchị ma ogologo oge. Raymond Lewis, VP nke Development Business na Palladium kwupụtara uru kasịnụ nke Outfield bụ na ọ na-enyere ha aka ịdị njikere. Maka ụlọ ọrụ dịka nlekọta ahụike, ọ nwere ike were ọnwa isii ruo otu afọ tupu ị nọ n'ihu onye na-eme mkpebi n'ezie.
Site na Outfield, Palladium nwere ike ịchọta ihe mmetụ niile ha na - eme - onye ha na ya nọ, ihe ekwuru, ajụjụ a jụrụ na ndị ọzọ. Nke a na-enye ha ohere ịkwadobe nke ọma oge ọ bụla iji zute onye ga-eme mkpebi ikpeazụ. Na ụbọchị, Palladium na-eji ụzọ njikarịcha elele. Ha na-enwe ike ịchọpụta isi mmalite akwụkwọ ntinye dị nso, hazie ụzọ ma jikọọ ya na sistemụ igodo ha họọrọ. Nke a na-enye ohere ka ndị nnọchiteanya ha rụọ ọrụ nke ọma.
Onye na-enyocha ihe ubi na-agagharị mgbe niile ma ha chọrọ ngwa ọrụ ngwa ngwa, dị mfe iji ma nwee ike soro ha n'ụzọ dị mfe. Inwe ịpụ na kọmputa, jikọọ na wifi na ozi ndekọ adịghị dị ka arụmọrụ dị ka ịdọrọ ama ama gị na ntinye ozi n'ime interface. Otu nzukọ n'ikpeazụ chọrọ ma ịnweta desktọọpụ na ịnweta mkpanaka. A na-echepụta ihe ngagharị ekwentị iji kwado usoro ọrụ nke rep mgbe ha na-aga. Fieldlọ ọrụ na-eje ozi ugbu a ọtụtụ narị ndị ahịa gburugburu ụwa. Uzo ha di elu gunyere CPG, CE na mkpuchi.
Gbalịa Outfield for Free
Tags: ubi reponye nnọchi anya n'ọhịaahịa ahịaoutfieldmputa ngwandị na-ere ahịa ahịaahịa reps
Austin Rolling bu ngalaba-nchoputa na onye isi nke Mpaghara. ọgbọ nke atọ. Ọ malitere ụlọ ọrụ mbụ ya, ebe nrụọrụ weebụ ejiji, mgbe ọ dị afọ 20. Ọ nwere BA na Nkwukọrịta site na Mahadum Ọwụwa Anyanwụ Michigan na MBA na Texas A&M University. O jirila ihe ka ukwuu n'ime ọrụ ya rụọ ọrụ na ngwongwo ndị ahịa na ohere IT na ahịa na ahịa, njikwa na mmepe azụmaahịa.
Ihe omumu banyere ahia: Ndi anyi nwere ike ikwu eziokwu?
Mpempe akwụkwọ nhichacha data na Excel